Translate Myanmar (Burmese) to Luxembourgish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Luxembourgish, Myanmar (Burmese) to Luxembourgish translations, Myanmar (Burmese) to Luxembourgish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Moien, wéi geet et
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Gëtt et soss?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Ech si gär wierklech sou vill
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Wéi vill wëll dësen Hamburger kaschten?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Kanns du mech en Taxi ruffen?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး et deet mer leed
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Ech interesséieren mech
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Meng Flotte gouf ofgeléist
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Ech sinn hei fir Geschäft
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Moien, mäi Numm ass
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Esou sorry, awer ech sinn bestued
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ech géif Iech froen
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Kënnt Dir mir op de Flughafen ginn?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Wat ass Zäit?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Wou ass d'nächst Policeplaz?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Kann ech Äre Lounempfänger benotzen?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Kanns du mir hëllefen?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Gitt mir drénken?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Wéi vill kascht et?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Ech sinn allergesch fir Gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Rufft en Dokter
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Gitt et en Dokter?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Kann echeRuff
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Rufft mir Ären Boss of.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Dëse Platz ass ganz flott
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Huelt mech zum Hotel
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Wat ass meng Zifferummer?